Isibuyekezo Sami Esithembekile Sesizini ye-'The Bachelorette ' - Ukuzijabulisa
Ingabe 'Isikhathi se-Bachelorette' 17 Sikufanele Ukubukwa? Nasi Isibuyekezo Sami Esiqotho Sombukiso Wokuqala
Is Bachelorette Season 17 Worth Watch
* Isexwayiso: Abonakalisi abancane phambili *
Namuhla kusihlwa, I-Bachelorette ibuyiselwe ku-ABC ngokuhola okusha sha: Katie Thurston. Angiyena umuntu ongaziwa ekuthambekeleni kokuzungeza uchungechunge oludumile lokuphola, kepha akekho noyedwa okhuluma ngokuzinikela okukhulu kwesikhathi okuhilelekile. (Njengakuyo, nginikela ngamahora angama-26 kuyo yonke inkathi ngethemba lokuthi izofinyelela kulokho okulindelwe.)
Njengoba kulula kakhulu ukunquma ukuthi isizini enikeziwe iyifanele yini iwashi ngokususelwa kusiqephu sokuqala, yilokho kanye engikwenzile. Kusukela kumncintiswano we-quirky kuya ekuholeni okusha, nakhu ukubuyekeza kwami ​​okuthembekile I-Bachelorette Isikhathi sonyaka 17.
Ngakho-ke, kwenzekani kudlalwandaba? Zonke izinto ezijwayelekile esizibonile kumasizini ayi-16 edlule we I-Bachelorette , kufaka phakathi isingeniso esisheshayo kuKatie, i-video montage evuthayo nokuvakashelwa yi-Bachelorettes Tayshia Adams noKaitlyn Bristowe, abasebenza njengababambisene nabo.
Vele, abafiki be-limo bajabule kakhulu kunangonyaka owedlule, bafaka yonke into kusuka ku-jock strap kuya ekugqokeni ikati (kufakwe intshebe). O, futhi ngingakhohlwa kanjani ngo-Andrew S., owayeqamba amanga eBrithani?
Ngemuva kokuhlangana nabancintisanayo, uKatie uphokophela ngaphakathi ukuyohlangana namadoda, akhipha zonke izitobhi. UJustin akamniki umdwebo ongaphelele wenhliziyo yakhe (ngokungathi sína), kepha uTre uphendulela umbhede weloli lakhe emgodini webhola.
Ekupheleni kobusuku, uKatie unikeza i-First Impression Rose ku-drumroll, sicela, uGreg ngaphambi kokungena emkhosini wokuqala wama-rose.
Ngakho-ke, kunjalo I-Bachelorette isizini 17 kufanele iwashi? Ngokumangazayo, impendulo inguyebo. Ngiyazi, ngiyazi-mhlawumbe uhambisa amehlo akho emcabangweni wokuchitha amasonto ambalwa alandelayo kwenye indaba yothando engahle iphele ebuhlungu.
Umehluko? UKatie akafani nama-Bachelorette edlule. Sibonile ubuntu obuhlukile-njengoHannah Brown, owayengakwazi ukuhlanganisa umusho ndawonye - kodwa asikaze sibone into efana noKatie. Ungokoqobo, uthembekile, futhi akesabi ukuhlekisa ngamahloni akhe. Kungakhathalekile ukuthi uKatie uyaluthola yini uthando, ngifuna ukwazi ukuthi kwenzekani ngokulandelayo, nokungenzeki ngaso sonke isikhathi.
Ukungasho, uBristowe no-Adams banikela ngento yamahlaya engingazi ukuthi ilahlekile. Angigcinanga nje nge-LOL kuma-popo abo-munching cameo ngesikhathi sokufika kwe-limo, kodwa futhi ngiyakwazisa ukuphawula kwabo okunokwethenjelwa kanye neseluleko sokuzibonela.
Okuwukuphela kwesici esingikhathazayo yilabo abangenele umncintiswano, okucacile ukuthi abaphumanga kakhulu selokhu kwavalwa. Ngenkathi idrama inenqwaba (isuselwa ku-trailer yalokho okuzayo), kukhona umugqa omuhle phakathi kokuzijabulisa nokucasulayo. Njengamanje, amadoda ayajabulisa. Kepha bayihlaya elilodwa kuphela lokuhlukaniswa nabantu ukweqa umugqa, futhi ngenxa yalesi sizathu, ngizolinika ezinye iziqephu ezimbalwa ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngizibophezele ngokugcwele yini kulobu budlelwano (mhlawumbe) obunamadwala I-Bachelorette Isikhathi sonyaka 17.
Isilinganiso se-PureWow: izinkanyezi ezingu-3.5
Isilinganiso sami sisekelwe kuphela kusiqephu sokuqala se- I-Bachelorette isizini 17, ngakho-ke ungezi emva kwami ​​uma kuthatha ithuba lokuba ngcono (noma okubi kakhulu). Yize lo mbukiso uhleliwe njengakuqala, ngikhangwa ngokweqiniso yiqiniso uKatie Thurston akhombisa ngobusuku bokuqala. Futhi ngenxa yalesi sizathu, ngiyanamathela… okungenani okwamanje.
Hlala usesikhathini njalo ngendaba ye-Bachelor Nation ngokubhalisela lapha.
OKUSHIWO: Uhlu oluphelele lwawo wonke ama-Bachelorette adlule, abekwe ohlwini
Thenga Okuhamba phambili kwe'Isiqu'Isitayela:
$ 298 Thenga Manje
ICity Cropped Blazer
$ 131 Thenga Manje
$ 12 Thenga Manje
ukubhukuda kuyantanta kubantu abadala
susa izinwele ebusweni unomphela
izindaba zothando eziphezulu hollywood movie
usuku lokugcina lwezilinganiso zokuphila zesikole
ikhambi lasekhaya lokwehlelwa inkwethu nokuwa kwezinwele
imiklamo yekhekhe lika-ayisikhilimu